अवार्डको आँधी, साख जोगाउने कस्ले ? - Sagarmatha TV
अवार्डको आँधी, साख जोगाउने कस्ले ?
काठमाडाैं । कुनै पनि क्षेत्रको समीक्षा, मार्ग–दर्शन, प्रत्साहन र प्रचार–प्रसारको लागि विभिन्न अवार्डहरुको आयोजना गरिन्छ । नेपालमा पनि स्थापित र विस्थापित गरी सयौं अवार्डहरु हुने गरेका छन् । कुनै अवार्डहरुको निरन्तरता अहिले पनि जारी छ । बढीजसो अवार्डहरु स्वार्थ पूरा भएपछि विस्तापित भएका छन् ।
नेपालमा खेलकुद, शिक्षा, स्वास्थ्य, सौन्दर्य, विकास निर्माण मात्र होइन कुनै जातीय विशेषका रुपमा पनि अवार्ड प्रदान गरिँदै आएको पाइन्छ । तर, आम दर्शकलाई लक्षित गरी गरिएका अवार्डको नाम लिनुपर्दा चलचित्र र सौन्दर्य प्रतियोगिता सम्बन्धी अवार्डहरु अग्रप्रंक्तिमा आउँछन् ।
पछिल्लो समय चलचित्र र सौन्दर्य प्रतियोगिता सम्बन्धी अवार्डको बाढी नै आएको हुँदा अवार्डको चर्चा र चासो चुलिँदै गएको हो । अवार्डको महत्व र मर्म सबैले बुझ्न थालेपछि अवार्ड आयोजनाले विशाल रुप लिएको हो । हाल नेपालमा सरकारी स्तरबाट र निजी स्तरबाट दर्जनौं अवार्डहरु आयोजना भइरहेका छन् ।
विगतलाई कोट्याउने हो भने नेपाली चलचित्र इतिहासमा प्रिय पत्रिकाद्वारा आयोजित सम्मान, कामना साँझ, लायन्स क्लब विशालबजारद्वारा आयोजित अवार्ड, नेपाल मोसन पिक्चर्स अवार्ड, नेफ्टा अवार्ड, राष्ट्रिय बक्स अफिस फिल्म फेयर अवार्ड, राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार (चलचित्र विकास बोर्ड), सुभद्रा अधिकारी चलचित्र पुरस्कार, एनएफडिसी राष्ट्रिय पुरस्कार, डि सिने अवार्ड, इनास अवार्ड, इन्फा अवार्ड लगायतका अवार्ड बढी चर्चित अवार्ड हुन् ।
यतिधेरै अवार्ड तथा सम्मान हुने चलचित्र अवार्डहरुमा राष्ट्रिय बक्स अफिस फिल्म फेयर अवार्ड, नेफ्टा अवार्ड, डि सिने अवार्ड, एलजी अवार्ड निरन्तर रुपमा आयोजना हुँदै आएको पाइन्छ ।
राष्ट्रिय बक्स अफिस फिल्म फेयर अवार्ड आयोजना गरेरै बक्स अफिस फिल्मी क्लब नेपालका अध्यक्ष रामबहादुर सुवेदी (आर.के.)ले गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डमा नाम लेखाउन सफल भएका छन् । उनले नवौं संस्करणका क्रममा सगरमाथाको आधार शिविरमा अवार्ड प्रदान गरेर नेपाली चलचित्र क्षेत्रको अवार्डमा नयाँ आयाम थपेका हुन् ।
त्यसो त उनी अवार्ड आयोजना गरेरै विश्व भ्रमण अभियानमा छन् । उनले अहिलेसम्म एक दर्जन भन्दा बढी देशमा अवार्ड आयोजना सम्पन्न गरिसकेका छन् । अवार्ड आयोजनामा एक किसिमको क्रान्ति ल्याएका सुवेदी नेपाली अवार्ड आयोजना अवार्ड जस्तो नभएको गुनासो गर्छ्न ।
धेरै अवार्ड आयोजना दाल भात जुटाउने शैलीले अवार्ड आयोजना हुँदा अवार्ड गरिमा मरेको उनले गुनासो गरे । उनले अवार्डको गरीमा बचाउन सवै अवार्ड आयोजकहरु एक जुट भएर संगठितरुपमा अघि बढ्नुपर्ने तर्क गरे । उनले आफूले मुलुकमा भइरहेका विभिन्न अवार्डहरुलाई एकत्रित गरी संगठितरुपमा अघि बढाउन नेपाल इभेन्ट अग्रनाजेशन एसोसिएसन गठन भएको समेत जानकारी दिए ।
आफूले हरेक अवार्ड पृथक गरेपनि अवार्डप्रति सन्तुष्टि नमिलेको तर्क गर्छन् । पछिल्लो पटक उलने अफिस म्युजिक अवार्ड सिंगापुर संस्करण सम्पन्न गरेका छन् ।
उनले आयोजना गर्ने गरेको नेसनल बक्स अफिस फिल्म फियर अवार्ड, ग्लोबल मोसन पिक्चर्स अवार्ड, बल्क बस्टर फिल्म अवार्ड, पृथ्वी परिक्रमा नागरिक सम्मान, नेसनल बक्स अफिस म्युजिक भिडियो अवार्ड र नेसनल हेरो अवार्ड हुन् । उनको आयोजना हुने सबै अवार्ड स्वदेशदेखि विदेशसम्म हुँदै आएका छन् ।
सुबेदीले पोहिलो पटक नेपाली चलचित्रको अवार्ड आयोजना दुबैइबाट २०१२ मा शुरु गरी अरेबियन मुलुक, दक्षिण एसियाली मुलुक थाइल्यान्ड र युरोपेली मुलुक बेलायतमा अवार्ड वितरण गरिसकेका छन् । समुन्द्री मुनि, हवाई जहाज (आधा आकाश), पानी जहाज र विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आधार शिविरमा समेत अवार्ड आयोजना गरेका छन् ।